China chọ ẹbọhọ nchegbu banyere ya ambitions na ịnweta-ọgaranya Antarctica on Monday, na ihe ukara si Beijing nwere dịghị atụmatụ na-amalite na Ngwuputa ke akwa Afrika. China si ịgbasa eme pola mpaghara bụ a Baịbụl hiwere isi n'ebe dị ka Beijing na akwado nzukọ kwa afọ nke Antarctic T ... GỤKWUO »
Argentine ọchịchị, ụlọ ọrụ Player na ịlụ na-atụ anya banye n'izu a a ogologo na-echere gọọmenti etiti Ngwuputa nkwekọrịta ahụ na-emekwa ẹdude iwu gafee mba, dị ka akụkụ nke na-aga n'ihu mgbalị iji na-awụlikwa elu-amalite ego na oru. The mba, otu ugboro a mmasị nke Ngwuputa investors, ha ... GỤKWUO »
Ọ bụ liftoff! China-wuru ụgbọelu na-ewe iji elu-igwe
Post oge: Ka-05-2017
Na nọworo China si Homegrown njem ụgbọelu C919 lifts anya na ya nwa agbọghọ ọsọ mgbe Shanghai Pudong International Airport on Friday. Around 3,000 ndị mmadụ àmà eme oge nke ejima-engine, otu-wara wara ụgbọelu si mpụta mbụ. The C919 oru ngo na oru na 2006. abụọ unu ... GỤKWUO »
SA Ngwuputa eme review adọta 131 nnyefe si ọrụ ugbo, miners na ụlọ ọrụ dị iche iche
Post oge: Ka-02-2017
Nwe ala na ngagharị ụlọ ọrụ bụ n'etiti 131 iche iche na-ebi nnyefe-arụ ụka ha ikpe n'elu ugbu a nyochaa nke South Australia na Ngwuputa-eme omume. A ọnụ na-ekwuru maka Ịnweta Resources na Energy Minister Tom Koutsantonis kwuru na "ozugbo nnyefe na-ekpokọtara" ha ga-mere n'ihu ọha ma ... GỤKWUO »
Mining iwu: ukwuu, akaha
Post oge: Apr-27-2017
The ogologo-contested mmegharị ugbu a Ngwuputa iwu na-aghọ esiwanye imikpu njehie nke usoro na ikpeazụ-nkeji ose nke ga-ha ka ha n'usoro iwu ochichi obodo ịma aka. Ọ bụrụgodị na Ịnweta & Petroleum Resources Development Act (MPRDA) Ndezigharị Bill na-agafe na ... GỤKWUO »
Modern Mining na Technology Week kicks apụ na Sudbury
N'oge mgbe a na Ngwuputa ụlọ ọrụ na-enwe a oké osimiri mgbanwe technology na ọhụrụ, ọ na-mgbe ihe dị mkpa na-arụ na-eto eto na-akụziri ha banyere ohere na oru. Nke ahụ bụ ozi òkè na April 21 n'oge kwa afọ azụmahịa luncheon ka mgbachapụ Mode ... GỤKWUO »
Italian uwe ojii na-eje ije gafere na Great Wall
Post oge: Apr-25-2017
Eight Chinese uwe ojii ga-aga na patrol na Italy na n'oge June iji nyere ha Italian ogbo chebe Chinese njem nleta, a agadi uwe ojii ukara kwuru na Monday. Ndị ọrụ nche ahụ, họrọ mba na nkà na Italian, ga-agagharị sinik tụrụ na Rome, Milan, Florence na Naples to ... GỤKWUO »
Gunnedah nwoke enweta nkwanye NSW Mining Young ịrụpụta Award
Post oge: Apr-20-2017
Gunnedah si Murray O'Keefe na-"chuffed" mgbe a họọrọ na-enweta ndị NSW Mining Young ịrụpụta Award. The Gunnedah Shire kansulo na Whitehaven Kol ọrụ a mara ọkwa dị ka na-eto eto na ndị NSW Mining Industry na Suppliers 'Awards na NSW nzuko omeiwu House mbụ nke ọnwa. Otu nke abụọ ... GỤKWUO »
Australia greenlights Rio Tinto si $ 2.45bn ire nke na-egwupụta coal na Yancoal
Post oge: Apr-14-2017
Australian ọchịchị nyere Yancoal (ASX: YAL), na enyemaka nke China si Yanzhou Kol Mining, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ìhè na-aga n'ihu na ya zubere $ 2.45 ijeri nnweta nke Rio Tinto si (ASX, Lon: Rio) thermal coal akụ na Hunter Valley. The Foreign Investment Review Board mma ndibiat, ... GỤKWUO »
Fiore Exploration ẹkedori-egwu mkpọsa na Chile
Fiore Exploration CEO, Tim Warman, mara ọkwa na mmalite nke-egwu mkpọsa na ụlọ ọrụ Pampas El Peñón gold oru ngo na Chile, nke na-ekpuchi ala na otu geological gburugburu ebe obibi dị ka Yamana si flagship El Peñón m. Warman gwa MINING.com ikpeazụ nke ọnwa na 2017 Prosp ... GỤKWUO »